Umalusi waseDashi: Umhlahlandlela Wokuzala Ekugcineni Kule Brindle Shepherd - Izinhlobo
Umalusi waseDashi: Umhlahlandlela Wokuzala Ekugcineni Kule Brindle Shepherd
Ufuna inja yakho yobubhalo elandelayo noma mhlawumbe nje ozodlala naye ezinganeni zakho?
Ungabheki ngaphezu kukaMalusi waseDashi; lezi zinja ezinhle kakhulu zingakwenza zombili!
Noma i-Dutch Shepherd ingahle ingadumi njengabanye abazala bayo abaziwayo bakaMelusi , empeleni zingenye yezinja ezinomsoco ezinempilo futhi ezilula ukuziqeqesha.
Ngemuva kwamehlo abo ansundu amise okwe-alimondi kunomngane othembekile, onokwethenjelwa nothandekayo impilo yonke.
Le nja ephilayo nenomdlandla ifanele noma yimuphi umndeni osebenzayo onezingane noma nama-singleton ezemidlalo.
Ngokungafani nezinhlobo eziningi zezinja, iDutch Shepard isacishe ifane nokhokho bayo emuva ngawo-1800, qhubeka ufunda ukuthola ukuthi kungani.
Inja Yabelusi BaseDashi Ukuzala Ukubuka
Imidlwane Yabelusi BaseDashi
Isimo Somalusi waseDashi
Usayizi woMalusi waseDutch nokubukeka
Usayizi woMalusi waseDashi
Ukubukeka Komalusi WaseDashi
Umhlahlandlela Ophelele Wokunakekela Le Nja
Inja Yabelusi BaseDashi Ukuzala Ukubuka konke
Abelusi baseDashi inja enobungani nxazonke , ukuzwana kahle nezingane, ezinye izinja ngisho nezilwane ezifuywayo zasekhaya.
Inja yokugada kuzo ingabenza bangaqiniseki ngabantu abangabazi, noma kunjalo, lokhu kungaphathwa ngokuhlangana kusenesikhathi futhi kaningi.
Ngamandla nobuchopho obuningi, lokhu kulangazelela ukujabulisa inja kuyintokozo yokuyiqeqesha.
Lokhu kubenza babe yizinja ezinkulu ezisebenzayo, ezilungele imincintiswano yokugijima nokulalela! Noma mhlawumbe ufuna umngane nje? Ngobuntu obuthandana nobumnandi futhi obuqotho kungekudala bazoba yingxenye yomndeni.
UMalusi waseDashi waye ngokomlando isetshenziselwa ukwelusa izimvu nezinkomo , ngokungamangalisi amaKennel Clubs uwahlukanisa ngaphansi kweqembu lokwalusa, kanjalo nabazala babo bakwaShepherd.
Muva nje, kungezinye ze- ama-canine angcono kakhulu wokulwa nobugebengu futhi bayingxenye yamathimba amaningi okusesha nokutakula kwamaphoyisa.
I- I-United Kennel Club kanti iFCI ibona iDutch Shepherd njengenja eyelusayo.
Lolu hlobo lusazokwaziwa yiAmerican Kennel Club esigabeni esithile sohlobo oluthile, noma kunjalo, luzihlukanisa ngezigaba ezixubene ngoba izinombolo nokuthandwa kwazo kukhule kakhulu e-United States.
Amanye amaklabhu okuzala asemthethweni afaka:
I-Dutch Shepherd Dog Club yaseMelika
I-American Dutch Abelusi Association
I-Dutch Shepherd ivela eNetherlands, lapho ngeminyaka yama-1800 yaqala ukwehluka kubazala bayo, abelusi baseJalimane nabaseBelgium.
Isetshenziswe ekuqaleni njengezinja zasepulazini ezinhloso eziningi zokwelusa kanye ukulawulwa kwemfuyo (okusho ukugcina izinkukhu ngaphandle kwezingadi) bathole ukubizwa kwabo njengezinja zamasosha neziqaphile.
Le nja enekhono icishe yanyamalala, kepha, ngamakhono ayo okuzivumelanisa nezimo bathathwa ngokushesha njenge amaphoyisa afanele nezinja zamasosha .
Kusukela ezingeni layo lokuqala lokuzala (elisukela emuva ku-1898), le nja ishintshe kancane, ngokungafani nabazala babo abangoMalusi exutshwe nezinhlobo eziningi .
Kwakungowe-1898 lapho yaqala ukubonakala e-US.
Umalusi waseDashi wazala ulwazi
Usayizi Abesilisa baphakathi kuka-22.5 ″ - 24.5 ″ nabesifazane 21.5 ″ - 23.5 ″
Isisindo Phakathi kwamakhilogremu angama-40 kuye kwangama-75
Isikhathi sokuphila Iminyaka engu-11-15
Uhlobo Lokuzala Izigaba Ezihlukahlukene
Inhloso Ukulusa, Ukushesha, Ukulalela, Ukucinga Nokutakula, Umsebenzi Wamaphoyisa
Ifanele i- Imindeni esebenzayo, Abangashadile, Izithandani Nezingane Zabo Bonke Ubudala
Ukuhluka Kwemibala Okumnyama, iGolide neSiliva Brindle
Isimo Ukusebenza, Ukudlala, Ukwethembeka, Ukulalela, Ukuqeqeshwa
Amanye Amagama Umalusi waseDashi
Uma ngabe ufuna ukwamukela, noma ukuthenga, qiniseka ukuthi abawelwanga nenye inja kaMelusi njengoba bekwazi ukubukeka okufanayo kubazala babo. Kufanele ngaso sonke isikhathi babe nejazi le-brindle.
Intengo ejwayelekile yomdlwane waseDutch Shepherd icishe ibe yi- $ 1,000 kuya ku- $ 1,500 USD.
Osayizi be-Litter bangahluka kusuka emidlwane engu-6-10.
Kodwa-ke uma ukhetha ukutholwa, izintengo zingahluka ukusuka kunoma yikuphi phakathi kuka- $ 50 kuya ku- $ 500 USD.
Uma ufuna ukutakulwa kwe-Dutch Shepherd kunezinhlangano ezimbili ongaxhumana nazo:
Ukusindiswa Komalusi WaseNorth America
Konke Ukutakula Kamalusi
Umdlwane onamasonto ayisishiyagalombili ubudala uzoba nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu ayi-11 kuye kwayi-17 futhi akufanele ube mude kuno-9 ″.
Imvamisa zikhule ngokugcwele cishe eminyakeni emibili ubudala futhi zivuthwe ngokomqondo cishe zibe zintathu.
Isisindo esincane (amakhilogremu)
Isisindo esikhulu (amakhilogremu)
6 amashumi amahlanu 57
Inja yaseDutch Shepherd iqotho kakhulu futhi izobopha eduze kwakho nomndeni wakho.
Khumbula, lokhu kuthembeka, okuhlanganiswe nokuhlakanipha kwabo okuphezulu kungadala ukukhathazeka nesithukuthezi lapho kushiywe yedwa. Ngakho-ke cabanga ngokunakekelwa kwezinsuku zezinja uma uhlose ukubashiya amahora amaningi.
Fancy ukuthatha umdlalo omusha?
IDutch Shepherd inamandla, futhi inentshiseko yokusebenza, inokuqina okuningana okubenza babe ngumlingani ophelele wokuqina.
Singaqinisekisa ukuthi uzokhathala ngaphambi kokuba benze!
Bona babe nemvelo ezimele , okusho ukuthi kwesinye isikhathi bangaba nenkani futhi babe nengqondo yabo ngakho-ke ubuholi obuqinile buyisihluthulelo.
Ngokwemvelo enobungane nazo zonke izidalwa ezinkulu nezincane, abelusi baseDashi bazokhombisa izintaba zothando nezothando kunoma iyiphi ingane, isilwane noma isilwane abazijwayele.
Imvamisa baphapheme ngabantu abangabazi okungabenza babambeke kancane kepha uma sebethuliwe, uMelusi ohlangene kahle uzobamukela masinyane endlini yakhe.
Izilwane ezincane zasendle, njengezikwele noma onogwaja, zingadonsa ukunaka kwalolu hlobo lokwalusa. Kepha ngaphandle kwethambo elinolaka emzimbeni wayo umdlalo wokujaha nguyena ozokwenzeka kakhulu.
Ukuhlalisana okuhle nokuqeqeshwa kuzoqinisekisa ukuthi ukuziphatha okungafuneki akwenzeki ukuvumela wena nomndeni wakho ukuthi nithande uthando futhi nijabulele lo mngane othembekile.
Izinja ezigade ngokomlando, le nja ngeke inqikaze ukuxwayisa noma yimuphi umuntu ongamazi osemhlabeni wabo.
Kodwa-ke, awaziwa ngokukhonkotha ngokungafani nezinhlobo ezithile ezincane nezamathoyizi.
Baziwa ngamakhono abo okufuya wemvelo, ukuhlukanisa phakathi kwesimo esisongelayo nesingeyona ingozi mhlawumbe kunzima kancinane kubo.
Ungamangali uma ubathola begijima belandela ingwejeje ngezikhathi ezithile.
Ikhwalithi enhle kuMelusi waseDashi ukuzinikela kwabo kubanikazi babo. Lapho nje leso sibopho senziwe phakathi komnikazi nenja cishe ayinakwephuka .
Baziwa ngokudela impilo yabo ngenxa yabathandekayo babo.
Bahlukaniswa njengenja enosayizi ophakathi nendawo, nabesilisa abafinyelela ubude obungu-24.5 ″.
Abesifazane imvamisa iyisentimitha noma amabili amafushane.
Bobabili abesilisa nabesifazane bamaphakathi noma kuphi phakathi kwamakhilogremu angama-40 kuye kwangama-75.
Imvamisa ididekile njengoMalusi waseJalimane onemibala ejiywayo, empeleni lokhu kuyinkomba yokuqala oyifunayo kuMelusi waseDashi: ijazi le-brindle lihlukile kuMalusi waseDashi.
Mancane futhi anesitokisi ngosayizi uma kuqhathaniswa nabazala bawo.
Njengoba ungacabanga ukusebenzela amaphoyisa, lolu hlobo olunamandla lunalo ukwakhiwa kwemisipha ukufanisa .
Zihlukaniswe kahle, zinenhloko emise okwekhanda, amehlo e-alimondi nezindlebe ezingunxantathu ezicijile. Ubude bemizimba yabo kufanele bube bude kancane kunokuphakama kwabo.
Umbala we-brindle ungangena ngegolide noma ngesiliva, okungavela ezinhlotsheni ezahlukahlukene.
Igolide lingasukela ku umbala oyisanti okhanyayo ube bomvu ngokujulile , kuyilapho isiliva lingavela licishe libe mnyama.
Njengoba zivela kokumpunga okukhanyayo oku-monochrome, ama-Dutch Shepherds aluhlaza okwesibhakabhaka aphikisana namazinga okuzalanisa kepha aya ngokuya ethandwa kakhulu.
Zinezinhlobo ezintathu ezahlukahlukene zezinhlobo zejazi (konke okunengubo yangaphansi yoboya):
Izinwele ezimfishane, bushelelezi ngomsila onezimpaphe
Izinwele ezinde, ezijiyile, eziqondile, ezinamaphiko kanye nomsila oboshwe kahle
Izinwele ezinezintambo, ezijiyile, ezinama-curls amade amaphakathi
Zonke izinhlobo ezintathu zamajazi zeshedi yaseDutch Shepherd, kepha njengoba kulindelwe uMalusi waseDutch onezinwele ezinde uzokhipha okuningi.
Imvamisa yokuxubha iyehluka kuye ngohlobo lwejazi:
Izinwele ezimfishane Ukuxubha ngezikhathi ezithile, kushintshelwa ekuxubha nsuku zonke ngesikhathi sokuchitha
Izinwele ezinde Ukuxubha okungenani kanye ngesonto noma ngaphezulu kuye ngezinga lomsebenzi nemvelo
Amajazi amabi Ukuhlanganisa kabili ngenyanga nokususa izandla ukususa izinwele ezifile kuyalulekwa kabili ngonyaka
Njengoba amajazi abo emelana namanzi, ukugeza kudinga ukwenziwa kuphela lapho kudingeka, ngakho-ke ngemuva kweseshini yokuzulazula odakeni.
Yenza ukubhekwa kwezipikili ngaphandle kwesimiso sakho sokuzilungisa, ubheke ubude bezinzipho masonto onke futhi usike lapho kudingeka.
Ukuhlanza amazinyo abo izikhathi ezimbalwa ngesonto kungagwema izingqinamba zamazinyo nezinsini. Kepha ngaphezu kwakho konke, umlomo onempilo uqala ngokudla okunempilo!
Umhlahlandlela Ama-calories angu-2 000
Amandla amaningi ngokuvamile asho ukugijima nokudla okuningi!
Njengenja esebenzayo yenja uMalusi waseDashi udinga ukulinganisela okuhle, ukudla okunamaprotheni amaningi . Lokhu kungahlangatshezwa ngesifunzo esezingeni eliphakeme esenzelwe izinja zemidlalo ezisezingeni eliphakathi nendawo.
Bazodla phakathi kwezinkomishi ezintathu kuya kwezine ze-kibble ngosuku.
Imidlwane idinga ukudla okune ngosuku okusatshalaliswa usuku lonke ukugwema ukuqunjelwa.
Ezinyangeni eziyisithupha ubudala lokhu kungancishiswa kudliwe kathathu, bese kuthi ezinyangeni eziyi-12, kunciphise okuphakelayo kwabo kuze kube ekudleni oku-2.
Uma sezikhulile ngokuphelele, izinkomishi ezintathu zokudla okomisiwe ezisatshalaliswa ekudleni okubili zanele.
Amaminithi Imizuzu engama-30 - 60
Nomfutho futhi Intelligent!
Abelusi baseDashi badinga ukuhlanganiswa kokukhuthaza ngokwengqondo nangokomzimba.
Ukuzivocavoca kwabo okuthandayo ukugijima, ukugijima nokugijima okunye!
Hlanganisa lokhu ngenhloso, noma ukukhuthazeka kwengqondo, futhi ungaba nethuba lokukudinisa. Zama ukudlala i-frisbee, ukulanda noma i-flyball okungenani imizuzu engama-30 kuye kwangama-60 ngosuku.
Ukuhamba ibanga elide, ukugijima nokuhamba izintaba nakho kuyindlela enhle yokuzivocavoca umzimba.
Khumbula nje ukuletha isitsha namanzi kini nobabili ngalezo zinsuku ezishisayo!
Ukuziyeka zikhululeke akufanele kube yinkinga ngoba ziyathandana kakhulu futhi zihle kakhulu kwezinye izinja. Njenganoma iyiphi inja, ku-leash kungcono kakhulu ezungeze imigwaqo njengoba zingaxhamazela.
Ngezinsuku zemvula nezinsuku ezivilaphayo kuhle uma unegceke ukuze bakwazi ukugijimela bese beqhubeka nokuzivocavoca umzimba nsuku zonke.
Abelusi baseDashi bangamabhulukwe ahlakaniphile aphuma kuzo zonke izinja ezingabelusi.
Ukuphuma phezulu ekilasini uma kukhulunywa ngokulalela, ubugagu nokwelusa.
Nge-IQ ephakeme kangaka, ukuqiniswa okuhle kuyindlela okufanele ihambe ngayo. Ngokushesha bazothatha ukuthi iziphi izindlela zokuziphatha eziholela ekwenziweni kokudunyiswa nokuningi.
Imidlalo evuselela ingqondo iyona engcono kakhulu!
Ukubagcina bematasa ngemidlalo yama-puzzle kuzobagwema ukuthi bakhathazeke futhi kunciphise isimilo esonakalisayo.
Uma ufisa okuthile ukuncintisana kancane, imidlalo yobubhalo igcwele ubumnandi futhi kuzokusiza uthole ukwethembana nobudlelwano nenja yakho.
Ukuhlangana kufanele kuqale njengomdlwane (ngaphambi kokuba kufinyelele emavikini ayishumi).
Ukubenza bajwayelane nomhlaba wangaphandle kuyisihluthulelo senja elinganisela kahle.
Ukuntuleka kokuzihlanganisa nabelusi baseDashi abazimele futhi abanamandla ngokwemvelo kungaphela ngenja enolaka futhi esabekayo .
Uma kuqhathaniswa abanye abelusi baseJalimane , uDutch Shepherd uhlupheka ngezinkinga ezincane zezempilo.
Lokhu kuvela ekutholakaleni kwayo futhi imithetho eqinile yokuzalanisa okuholela ezifweni ezilinganiselwe zefa.
Kodwa-ke, njengoba beyingxenye yomndeni wozalo lukaMalusi inkinga yokuqala okufanele ibhekwe yi-hip dysplasia.
Uma kuqhathaniswa nethuba elingu-19% labelusi baseJalimane abanalo lokuthola lesi simo, abelusi baseDashi banamathuba aphakathi kuka-5% kuya ku-8% we-hip dysplasia kanye nethuba elingu-3% lokuthuthukisa i-elbow dysplasia.
Izinkinga zamehlo njengeGoniodysplasia zingenzeka; kulapho ukwanda ketshezi ngaphakathi kwamehlo ezimeni ezimbi kakhulu, kungadala ubumpumputhe.
Olunye udaba lwamehlo olujwayelekile iPannus lapho ifilimu e-grey-pinkish imboza iso, uma ingalashwa, nayo izodala ukungaboni.
Abelusi baseDashi abawona amazambane okusofa, ngakho-ke uma ufuna inja ongabuka nayo i-TV , akuzona ezakho!
Lezi zinja ezithandekayo zidinga ukuzivocavoca okuningi, zihlakaniphe kakhulu futhi zilula ukuziqeqesha ngakho-ke noma ngubani ozimisele ukufaka umzamo uzokwakha isibopho esiqinile futhi esihlala njalo nazo.
Akukho lutho ngaphandle kohlobo olunenhliziyo enomusa noludlalayo, abelusi baseDashi banesimilo esihle futhi bazongena ngokuphelele kunoma iyiphi indlela yokuphila yemindeni esebenzayo.
Isimo esihle, esixubene nejazi elihle le-brindle, ungaqinisekisa ukuthi bazogqama kuzo zonke izizathu ezifanele epaki yenja!
Sazise ukuthi yini oyithandayo ngalolu hlobo kumazwana angezansi.
Ukuzalela Inja Yakho: Okufanele Ukwazi
blue heeler x umalusi wase-australia
zonke izinhlobo ezihlukile zama-pitbulls
ukuhlanganiswa okugcwele komgodi wamalebhu
inja emthende emnyama nansundu